I-Nettle Shampoo Recipe
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Imifuno Sorrel
Isobho elihlaza kwi-nettle kunye ne-sorrel eBelarusian I-Nettle ne-sorrel-yokuqala imifuno yasentwasahlobo. Emva kobusika obude, ufuna ngokwenene into ethile entwasahlobo, kungekhona nje kwimoya, kodwa kunye nokutya. Umzimba ulangazelela iivithamini zangempela, ekubeni yonke imifuno kunye neziqhamo zaphesheya sele zihluphekile kwizinto ezincedo ebusika. Isobho esingenanto esilula kunye ne-sorrel siya kuba luncedo.
Imifuno yokuhlwaya 1 tbsp. l.
Amanzi 2.5 l
Fresh Sorrel 200 g
Ukuhlamba okutsha 300 g
Iipatata 2 ii-pcs.
Inyathelo 1 Ukwenza isobho kufuneka uthabathe iimbambo zeengulube, inetha elincinci, i-sorrel, iifatate, anyanisi, ioli kunye nemifuno. Ukondla isobho seklabishi, kufuneka uthathe ukhilimu omuncu, amaqanda kunye nemifuno ye-dill.
Inyathelo 2 Amathambo ahlambuluke ngokufanelekileyo emanzini aphelileyo kwaye anqumle kunye nezimbambo.
Isinyathelo 3 I-ossicle elungiselelwe efakwe kwisipuphu, uthele amanzi aphelileyo, ufike ekubiliseni, uyancitshisa kakhulu ubushushu, ususe i-foam kwaye uqhubeke ubilisa ngaphandle kokubilisa kuze kube yilapho ubumnandi benyama.
Inyathelo 4 Hlanza i-nettle encinci, yimbole emanzini abilayo kwaye ubilise imizuzu emi-5.
Inyathelo 5 Phonsa i-nettle kwi-colander uze uyikhuphe.
Isinyathelo 6 Hlanza kakuhle.
Inyathelo lesi-7 Dlulisa i-nettle ebilisiwe kunye ne-sorrel kwi-grill encinci ye-grinder yenyama.
Isinyathelo 8 I-Peel iitapile, hlamba uze uthathe iinqununu.
Isinyathelo 9 Beka iizambane kwi-mhlu uze ubilise kude kube lula.
Inyathelo 10 Yinqumle i-bulb, yinqumle kwisiqingatha, kwaye emva kwesinye isahlulo sibe ngamacangca amancinci.
Inyathelo 11 Gcoba i-anyanisi de ibe yincinci.
Inyathelo 12 Kwi-misonzi ebilisayo kunye namazambane, gcoba i-anyanisi, i-sorrel kunye ne-nettle uze ungeze imifuno yokuhlwaya ukunambitha.
Inyathelo 13 Ubilise isobho seklabishi ngemizuzu eyi-10-15.
Isinyathelo 14 Amaqanda ubilisa kanzima, ukubola uze uthathe iikhabhi.
Inyathelo 15 Xa ufaka kwisitya ubeke 1 tbsp. l. amaqanda aqhekekileyo, uwathulule ngesobho, ixesha kunye nekhilimu omuncu uze ufefe ngemifuno ekhethiweyo.
Isobho se-Sorrel kunye ne-pasta
Isaladi evela kwi-sorrel kunye neeperesi
Isobho sohlaza iklabishi kunye ne-sorrel
Isobho sohlaza kunye ne-sorrel
Isophu evela kwi-sorrel kwi-multivarka
Imfazwe yamaNutcrackers: uVeveni Plushenko no-Ilya Averbukh baqalise imiboniso emitsha eMoscow
Icandelo leSaareya lezinto eziphathekayo kunye neentlondi zamabhinqa
Ukutya okuncedo kunye namavithamini
Ukwazi abafana abavela phesheya
Tattoos kumantombazana ngeenyawo
Amazambane ahlambulukileyo kunye noshizi
Ukudala umoya wothando phakathi kwendlu
I-Pilates Exercises for Women's pregnant